Fivoriamben’ny Firenena Mikambana Nolazaina fa namono olona 4000 ny zandary Malagasy
Fanamboarana ny R44 Tapaka noho ny hadalan’ny fanjakana?
Nalaza omaly ny resaka fa niala sy nanatsahatra ny asa fanamboarana ny lalàm-pirenena faha-44 ny orinasa nahazo ny tsenan’asa, ary efa notaomina niala tany avokoa ny fitaovana na ireo “engins” hampiasain’ilay orinasa sinoa nahazo ny tsenan’asa.
Raharaha Ambohitrimanjaka Niditra an-tsehatra ny Loholona
Nanatanteraka fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka omaly alatsinainy 21 oktobra 2019 ireo Loholon’i Madagasikara avy amin’ny Faritanin’Antananarivo izay nahitana ny Loholona Ramalason Olga,
Antananarivo Tena nilaharana ny solika
Hatramin’ny alim-be omaly dia mbola nilahatra lasantsy ny olona teto Antananarivo Renivohitra.
Toamasina Misy manampahefana mivoy adim-poko
Voizina be ny resaka adim-poko amin’izao ao Toamasina ao. Raha ny vaovao azo mantsy dia mandeha ny feno fa tokony ho zanak’i Toamasina
Raharaha Ambohitrimanjaka “Mbola miady amin’ny fahafatesana ilay zandary”
Voalaza fa mbola miady amin’ny fahafatesana ilay zandary teny Ambohitrimanjaka naratra izay tsaboina ao amin'ny Hjra.
Solika Hiakatra ny vidiny?
Tsy fantatra intsony izay tena marina fa maro ny toby fivarotan-tsolika tsy nanana solika teto Antananarivo tamin’iny faran’ny herinandro iny. Tsy vao izao io fa matetika tato ho ato.
Raharaha Ambohitrimanjaka Manondrana ny fanjakana
Diso daty ny taratasim-panjakana, toa namboamboarina haingana mba hilazana fa efa ela ny fanjakana no nampahafantatra ny hisian’ny tetikasa,
Voaresaky ny ONG anankiray tao anatin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana na ny ONU tanterahina any New York Etazonia ny momba an’i Madagasikara.
Tao anatin’ny 5 taona dia nisy ny hetsika ara-miaramila nataon’ny zandarimariam-pirenena, ka namonoana olona ankitsirano hatrany amin’ny 4000 na “execution sommaire” tsy mandalo raharaham-pitsarana sy tsy misy fanajana zon’olombelona, raha ny nambaran’io ONG io. Ho an’ny volana aprily-jona 2019, dia tanàna maro tany Betroka no lasibatry ny fanafihana. Any amin’ireo toerana manan-karena harena an-kibon’ny tany, dia nambara fa nisy ny famonoana mba hahakivy ny olona hiala hahafaha-mitrandraka ny harena, hoy ny ankapoben’ny tatitra.
Nandiso tanteraka izany kosa ny avy amin’ny zandarimariam-pirenena fa tsaho izany, raha ny nambaran’ny Kolonely Ravoavy Zafisambatra. Tsy nisy ny famoizana ain’olona afatsy ny mandritra ny fifandonana amin’ny dahalo. Tsy misy antony mihitsy hamonoana olona tsy manan-tsiny. Ny zandary dia manatanteraka ny asa fampandriana fahalemana no ataony any Atsimo, ary ao anatin’ny fanarahana tanteraka ny lalàna sy ny zon’olombelona.